Afaka bevohoka ve aho?
Amin'ny vanim-potoana miandry ny fiainam-baovao, maro, na dia ny hetsika mahazatra indrindra amin'ny reny amin'ny ho avy aza dia mety hanimba zaza iray izay ao an-kibony. Izany no mahatonga ny vehivavy iray mikarakara ny toetry ny zazakely amin'ny hoavy dia tokony hanaraka araka izay azo atao ny zavatra rehetra ataony ary miezaka tsy hanao fahadisoana lehibe.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiteny aminareo izahay raha mety ho vehivavy bevohoka ny fihomehezana, ary ahoana no mety hanimba ny zaza ho avy.
Afaka mitombo ve aho mandritra ny fitondrana vohoka?
Ny ankamaroan'ny mpitsabo momba ny fanontaniana raha mety ho an'ny bevohoka ny vehivavy bevohoka, mamaly amin'ny fomba mazava, - tsy azo atao izany. Ireo renim-pianakaviana amin'ny hoavy koa dia mahatakatra tsy takatry ny saina fa ny fanekena tsy tapaka io fepetra io, dia afaka manisy lozam-bady iray izay tarihina ao am-pony, na izany aza, tsy azon'izy ireo hazavaina amin'ny hoe iza marina no mifandray amin'izany.
Andeha hiezaka hamantatra ny antony tsy ahafahanao mijanona rehefa bevohoka ianao. Mifanohitra amin'ny finoan'ny besinimaro, tsy azo atao ny manindrona na manindrona ny foetus mandritra ity toe-javatra ity, satria voaaro tsara amin'ny fiantraikany ratsy amin'ny vokatry ny ivelany ny fluid amniotic. Mandritra izany fotoana izany, ny toerana misy ny vatana "mihazakazaka" dia miteraka fitomboan'ny fihenjanana amin'ny hozatry ny hozatra, izay matetika mahatonga ny fihenan'ny taolam-paty. Noho izany, ny fahazarana mihazona matetika sy matetika mihetsiketsika mandritra ny fitondrana vohoka dia mety hiteraka fampijaliana na fanombohan'ny fahaterahana vao haingana.
Tokony ho malina ny vehivavy raha oharina amin'ny lalan-drà sy ny trombophlebitis. Mandritra ny fihomehezana dia mihasimba ny fampidiran-dra ao amin'ny faravodilanitra ambany, ary mety hivoatra ny toe-javatra. Matetika ny vehivavy bevohoka matetika no mahatsapa ny tsy fahamendrehana eo amin'ny tongony, miaraka amin'ny endriky ny oida.
Mandritra izany fotoana izany, aorian'ny herinandro faha-38 amin'ny maha-bevohoka azy, rehefa mipoitra ny zaza, dia afaka manoro hevitra azy ny dokotera mba hanatsara ny fomba fiasan'ny mpiasa. Na ahoana na ahoana, dia tena mahakivy ny manao izany amin'ny sitraponao, fa tokony hifantina amin'ny dokotera mialoha.
Fianakaviana ao am-bohoka
Fahadisoam-panantenana vao haingana - soritr'aretina
Proginova nandritra ny fitondrana vohoka
Trimestre amin'ny fitondrana vohoka amin'ny herinandro
Mashing before delivery
Adin-tsaina nandritra ny fitondrana vohoka tany am-boalohany
Tsy fahampian-tsakafo mandritra ny fitondrana vohoka - 20 herinandro
Ny vegetarano sy ny fitondrana vohoka no sakafo tsara indrindra ho an'ny reny hoavy
Rahoviana vao manomboka mifindra ilay zaza?
Mampihena ny tongotra mandritra ny fitondrana vohoka
Fiterahana taorian'ny 40 taona
Navoaka tamin'ny herinandro 40 herinandro
Polysorb nandritra ny fitondrana vohoka
Dress Maxi ho an'ny vehivavy feno
Samsa - resipe
Fandoroana ny labia
Vehivavy akanjo mody
Afaka manasa ny lohako amin'ny rano mangatsiaka ve aho?
Mitafy kiraro amin'ny kapa ve izy ireo?
Famoronana varavarankely - curtain
Sakafo miaraka amin'ny menaka
Olon-kôkôsy ho an'ny tarehy
Inona no dikan'ny hoe tia?
Ahoana no hamaritana raha tia anao ny olona iray?
Pyoderma - fitsaboana
Oranges mandritra ny fitondrana vohoka
Ahoana ny fomba hanasa palitao polyester?